FAMPAHALALANA SY SARY ROMAN ROTTWEILER - ALIKA
Fampahalalana sy sary Roman Rottweiler
Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Ny Roman Rottweiler amin'ny ankapobeny dia mitovy amin'ny a Rottweiler mahazatra, karazana mpiambina tahaka ny mastiff / andian'ondry fotsiny amin'ny endrika sy toetrany. Izy io dia manana vatana mendri-kaja lehibe, manaitra, mavesatra, matanjaka, goavambe, matanjaka. Ny loha dia malalaka, mavesatra ary matanjaka miaraka amin'ny ketrona sasany. Ny karandohany dia malalaka sy lehibe, misy karan-doha aoriana. Ny fijanonana dia lalina ary voafaritra tsara. Ny sakelaka dia malalaka sy feno ary toradroa. Ny molotra dia mandroso tsara, matevina, misy manidina manidina somary antonony ary molotra ambany. Ny nify dia tokony mamorona manaikitra hety. Ny maso dia miendrika almond, milentika lalina, maneho hevitra, misaraka tsara ary maizina. Ny sofina dia pendant, triangular, entina mandroso ary tafasaraka tsara. Matevina ny hoditry ny sofina ary malefaka ny volony. Ny orona dia malalaka sy mainty, raha tsy misy loko hafa ankoatry ny lokon'ny mainty, dia ny lokon'ny orona no loko ifotony, toy ny palitao mena, orona mena na palitao manga, orona manga. Maizina ny lokony. Nify 42. Ny nify dia lehibe sy matanjaka. Mahery ny hatoka, voavolavola tsara, arched antonony, misy dewlap. Ny tratra dia malalaka sy lalina, manana tratra mialoha-tratra misy taolan-tehezana voahitsakitsaka tsara. Mahery sy hozatra ny foibe foibe. Ny tongotra eo anoloana dia matevina ary arched tsara. Ny rambony dia mety ho tafatoetra ka mamela taolan-tongotra iray na roa na voajanahary avelany raha avela voajanahary dia aondrana ao ambadika rehefa faly na mihetsika. Ny dewclaws dia mety hesorina ny dewclaws / ny dewclaw avo roa heny matetika eo am-piterahana. Ny palitao dia matevina ary manomboka amin'ny malama ka hatramin'ny plush dia mety lava izy io nefa tsy tadiavina. Palitao matevina sy plush no tadiavina ho an'ny Rottie miasa ho mpiambina andian'ondry. Ny lokon'ny palitao dia mainty / mainty, mainty / harafesina, harafesina mainty / mainty, mainty / mahogany ary mety koa tonga amin'ny loko mena / mena, manga / manga na mainty hafa dia ekena ao amin'ny Roman Rottweiler fa tsy irina. Gait: ny Rottie dia trotter manana forereach matanjaka sy mpamily aoriana matanjaka. Mandrakotra ny tany tsy misy ezaka izy io.
Ny Rottweilers voalohany dia tonga tamin'ny loko maro samy hafa amin'ny brindle, volondavenona, mavo sy mainty, mavo sy mainty, ary mazava ho azy izay mbola hitantsika ankehitriny, tena mahalana ny mena sy mena mainty ary mena Rottweilers no loko tsy fahita indrindra amin'izy rehetra. Ny alika mavo sy volomparasy no tena fahita. Ny marika fotsy amin'ny tarehy, tratra sy tongotra dia hita Rottweiler ankehitriny dia matetika no manidina feta misy marika fotsy izay mazàna manjavona miaraka amin'ny fotoana, na dia misy aza mitazona ny fotsy. Tamin'ny Rottweiler voalohany dia loko azo ekena ny brindle mahazatra.
Inona ny Roman Rottweiler ary inona ny mahasamihafa azy sy ny Rottweiler mahazatra? Ny Roman Rottweiler dia famoronana indray an'ny Rottweiler tany am-boalohany, Rottweiler sahala amin'ny mastiff izay niampita ny Alps mpiandry omby sy niambina omby ary koa niady tamin'ny Romana. Alika lehibe kokoa noho ny Rottweiler mahazatra izy io, izay fohy kokoa. Ny Roman Rottweiler dia ny Tibetan Mastiff tahaka ny Rottweiler mahazatra dia ny Mpiandry Aostraliana . Milamina, matoky tena, mora miofana, atletika, be herim-po, miaro, azo atokisana ary be fandavan-tena, manana toetra azo itokisana izy. Ilaina mafy ity fampiofanana mafy sy mitandrina ity ho an'ity karazany ity, raha tsy izany dia mety ho lasa alika mahery sy mahery setra izaitsizy ianao. Saingy afaka, miaraka amina fikirakirana araka ny tokony ho izy, koa dia afaka ny ho namana tsy mivadika, be fitiavana ary tena manome valisoa. Ireto alika ireto dia mitaky tompona mahazaka ny habeny. Ny Rottie dia alika mpiambina voajanahary miaraka amin'ny toetrany malefaka. Tena manan-tsaina izy io ary nanaporofo ny maha-zava-dehibe azy io amin'ny asa ataon'ny polisy, ny tafika ary ny fomba amam-panao nandritra ny taonjato maro. Noho ny habeny dia tokony hanomboka tanora ny fiofanana - ary mbola kely ny alika. Ity karazana ity dia mila mpitarika, mpiara-miasa ary -piaraha-monina ho tena sambatra. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra mazava ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Rehefa mahazo fitarihana tsy miova ny Rottweiler ary voaofana dia ho mpiara-milalao tsara ho an'ny ankizy izany. Hanaiky ny saka, alika hafa ary biby hafa ao an-trano izy raha mbola nifanerasera tsara ilay alika ary manana tompona manamafy ny fahefany amin'ilay alika. Ny mpinamana sy ny havan'ny fianakaviana dia raisina an-tsitrapo amin'ny fomba mazoto. Ny olon-tsy fantatra izay ahitan'ny alika ny fikasan-dratsiny dia tsy afaka mandeha lavitra noho ilay sisin-dalana. Ny karazany dia mahomby amin'ny fankatoavana fifaninanana, Schutzhund ary ny fanarahana.
shetland mpiandry ondry volamena retriever mifangaro
Haavony: farafaharatsiny 26 ½ santimetatra (67 cm) lanja: farafaharatsiny 120 pounds (54 kg)
26 1/2 santimetatra - 27 santimetatra (67 - 69 cm) - kely
27 1/2 santimetatra (70 cm) - salantsalany
28 - 29 santimetatra (72 - 74 cm) - lehibe
30 santimetatra + (76 cm) - fanampiny lehibe
Haavony: farafaharatsiny 24 ½ santimetatra (63 cm) lanja: farafaharatsiny 80 pounds (36 kg)
24 1/2 - 25 santimetatra (63 - 65 kg) - kely
25 1/2 - 26 santimetatra (65 - 67 cm) - salasalany
27 - 28 santimetatra (69 - 71 cm) - lehibe
29 santimetatra + (74 cm) - (fanampiny-lehibe)
Ity karazana ity dia mora tohina amin'ny fahasimban'ny ACL. Mora voan'ny dysplasia. Mirona mitroka sy mihinana be loatra. Mora voan'ny entropion koa (mihalefaka ny elanelana eo amin'ny hodi-maso).
Ny Roman Rottweiler dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Ireo alika ireo dia somary tsy miasa intsony ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely.
firy ny karazana alika purebred any
Mila fanatanjahan-tena be dia be ny Roman Rottweiler. Tsy afaka manome asa be loatra an'ireo alika mahery ireo ianao na manao fanatanjahan-tena mivelona amin'izany. Mila entina isan'andro izy ireo mandeha na mihazakazaka . Ny fihazakazahana any anaty ala sy any an-kalamanjana dia tena mahafaly azy ireo ary tsy maniry ny hirenireny lavitra anao izy ireo. Ny filomanosana na ny fihazakazahana eo akaikin'ny bisikileta dia hetsika lavorary ho an'ireo alika ireo ary tian'izy ireo koa ny mamerina baolina.
Ankizy 10 ka hatramin'ny 12 eo ho eo
Ny palitao malama sy manjelanjelatra dia mora karakaraina. Borosio amin'ny borosy mafy volo ary mandro raha tsy ilaina. Ny palitao plush koa dia mora karakaraina ary mampiasa palitao lava somary lavalava dia mila fiheverana bebe kokoa arakaraka ny halavan'ny palitao sy ny hateviny. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny Roman Rottweiler dia amin'ny heviny Rottweiler be loatra, izay marina kokoa amin'ireo alika tany am-boalohany izay nisy an-jatony taona lasa izay. Misy vitsivitsy ny mpiompy izay mamboly an'ity karazana Rottweiler ity. Ny mpiompy iray, ny anarany Emily Tiscarenio avy amin'ny Colossal Rottweilers, dia nahomby tamin'ny fanekena ilay karazany niaraka tamin'ny Academic Kennel Records tamin'ny anarana hoe Roman Rottweiler. Ity fananganana indray ny Rottweiler tany am-boalohany ity dia razamben'ny Tibetan Mastiff ary mety mastiff Italiana. Ireto razambe romanina taloha ireto dia niompy alika mpiandry ondry sy alika mpiady. Ny fotoana voalohany nisehoan'izy ireo tamin'ny soratra dia ny taona 74 am.f.i. ny Romanina dia nampiasa an'io alika an-tendrombohitra io nandritra ny vanim-potoana antenantenany mba hiambina sy hiarovana omby ho an'ny miaramila romana niampita ny Alpes. Tokony ho lehibe izy io mba hiarovana sy hamindrana ny omby namahana ny andian-tafika romana ary ho matanjaka sy ho lava volo ara-batana sy ara-tsaina any an-tendrombohitra masiaka. Tokony ho marani-tsaina, vonona hiasa, ary hanana fiambenana matanjaka. Nentina tany Eoropa ireto alika ireto niaraka tamin'ny legiona mpanafika Romana. Ny havany akaiky indrindra dia ny Alika Mountain Mountain lehibe kokoa ary ny Alika Mountain Bernese , ary azo inoana fa ny mpanao ady totohondry misy ifandraisany. Rehefa navelan'ny Romanina ny alik'izy ireo niaraka tamin'ny alika mpanaraka (Rottweiler) nipetraka tany Alemana noho ny lalana tsy azo aleha sy ny honahona, io no nahazoan'ny Alemanina santionany vitsivitsy tamin'ny karazany. Nanjary faritany romana ireo faritra ireo. Ny faritany iray dia i Rottweil, naorina tamin'ny taona 74 taorian'i Rottweil, dia tsy maintsy niandry omby ireo, niambina ny omby, nitandrina ny filaminana tao anaty omby, nampandeha ireo omby, nampandeha ireo ombilahy ratsy toetra, ary miambina ny tompony sy ny fananan'ny tompony ny kitapom-bolany izay nafatony tamin'ny vozony, tsy mora izany. Taorian'ny nahazoan'ny Alemanina ny Rottweiler dia nanomboka nanamboatra azy io tamin'ny habeny izy ireo ary toy izany koa ny faran'ny Roman Rottweiler. Na dia tamin'izany fotoana izany aza dia nisy resabe teo amin'i Rottweiler kely sy ilay Rottweiler lehibe hany ka nisy ady totohondry momba an'io raharaha io. Ny Alemanina dia naniry Rottweiler fohy kokoa hanatsara ny fahaizany miompy. Rehefa mamindra omby ny alika dia manaikitra ny tongotra mandra-pandehan'ny omby. Tian'izy ireo ho fohy kokoa izany, ka tsy nanimba ny kalitaon'ny hena avo kokoa amin'ny tongotra ny manaikitra. Alika fohy kokoa ambany kokoa amin'ny tongony. Rehefa mamolavola omby dia manana fotoana sarotra kokoa hamelezana sy handratra ilay alika kely kokoa ny omby ka fanahy iniana nisafidy alika mandro ao amin'ny programa fampiterahana azy ireo. Nisy ny hafa te hitahiry ny Rottweiler tany am-boalohany sy ny herin'ity alika lehibe ity, ny fahaizany miambina, ny fitaterana ary ny fahaizany mihaza lalao lehibe.
AKR = Firaketana momba ny Kennel akademika
IRUMR = Registra molosser iraisam-pirenena momba ny fampiasana romanina
Rottie romana olon-dehibe miaraka amin'ny alika kely - Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
'Mpanara-maso' Riesig's Black Roman Shield ny kilasy fampisehoana Roman Rottweiler amin'ny 2 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Volomparasy Dog von Riesig ny kilasy fampisehoana Roman Rottweiler amin'ny 1 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Radio Flyer von Riesig ny kilasy fampisehoana Roman Rottweiler amin'ny 2 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Elway ny kilasy fampisehoana Roman Rottweiler amin'ny 4 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Bausto kilasy fampisehoana Roman Rottweiler amin'ny 4 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Gunnar ny kilasy volavolan-dalàna Roman Rottweiler amin'ny 8 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Ramatoa Furs ny kilasy drafitra Roman Rottweiler amin'ny 4 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Akira von Riesig ilay kilasy drafitra Roman Rottweiler amin'ny 2 taona. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Marilyn von Riesigthe kilasy fampisehoana Roman Rottweiler amin'ny 8 volana. Sary natolotry ny Colossal Rottweilers
Hijery ohatra misimisy kokoa momba ny Roman Rottweiler
Sary Roman Rottweiler
omby terrier anglisy bulldog mix
manao ahoana ny bulldog anglisy
jack russel terrier pitbull mifangaro